Aung Win Hein (Noble): 01/18/13
" ကျနော့်ကို မရီစားပါနဲ့..."
‘cause I‘ve got braces on my teeth.
who‘s always chosen Last.
than the others in my class.
I’m the beggar on the corner.
You’ve passed me on the street.
@@@ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးငယ်အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါတယ် @@@
I wouldn’t be out here beggin’ if I had enough to eat.
I pretend it doesn’t hurt me when people point and stare.
There’sasimple way to show me just how much you care.
ကျနော်ဟာ မျက်မှန်နဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။
သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က ကျနော့်ကို “ဂိခ်” လို့နာမည်ပြောင် ခေါ်တယ်။
မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ မပြုံးတာ ဖြစ်မယ်။
တစ်ခုခုကို ခံစားခဲ့တာကြောင့် အိပ်ပျော်သွားတဲ့အထိ
ကျနော်ဟာ အတန်းထဲက အခြားသူတွေထက်
မေးစရာလည်း အများကြီး မရှိဘူးမဟုတ်လား။
ကျနော်ဟာ လမ်းထောင့်နားက သူတောင်းစားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
သင်ဟာ လမ်းပေါ်မှာ ကျနော့်ကို ကျော်သွားခဲ့ပြီလေ။
ကျနော့်မှာ စားစရာသာ လုံလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဒီနားမှာ တောင်းစားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော် သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ဒီကုလားထိုင်ကစပြီးကျနော့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကို ကျနော် အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့တယ်။
လူတွေက ကျနော့်ကို သတိထားပြီးစူးစိုက်ကြည့်တဲ့အခါ
ဒါဟာ သင်ဘယ်လောက်ကျနော့်ကို ဂရုစိုက်သလဲဆိုတာကို ပြသဖို့
ကျနော့်ကို နာမည်ပြောင်တွေ မခေါ်ပါနဲ့။
ကျနော်နာကျင်ခံစားပြီးမှ ရလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုလည်း မလိုချင်ပါနဲ့။
ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာတော့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ အတူတူပါပဲ။
တစ်နေ့မှာတော့ ကျနော်တို့အားလုံးမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့တောင်ပံတွေ ရှိလာမှာပါ။
ဟေ… ကျနော်တို့အားလုံးဟာ အတူတူပဲမဟုတ်လား။